नेपाली मनहरू nepalimanharu.com (शिव प्रकाश ): मान्छे जस्ता देखिने मान्छेहरू
आँखामा ब्वाँसाहरु ! घुमेका छन्-
चेतनामा चीलहरु ! लुकेका छन्-
मनपेटमा चितुवाहरु !
नाचेका छन्- अनुहारमा बिरालाहरु ! उडेका छन्-
मतिष्कमा गिद्धहरु !
लुपेका छन् कोखमा सापहरु !
चुहाउँछन् संवेदनाका आँशु- गोहीहरु ! भेटिन्छन्-
व्यवहारमा स्यालहरु !
स्वरुपमा ती मान्छेहरु ! के यस्तै हुन्छन्
मान्छे जस्ता देखिने मान्छेहरु ?
(अश्रृंगार कविता अभियान …) बोस्टन, अमेरिका ।
बेदनाथ पुलामी ( उमेश )December 9, 2009 at 5:15 PMशिव प्रकाश जी ले वर्तमान परिवेशका मानिसहरुको यथार्थ तर उनिहरु भित्र बिग्रदो (सडिएको ) मानवता गुम्सिएर रहेको - जसलाई बुझ्न र चिन्न नै नसकिने अबस्थामाँ रहेको छ भनेर राम्ररी उजागर गर्न सक्नु भएको छ ! यो 'आव्यक्त मान्छे' भित्र !ReplyDeleteदूर्जेय चेतनाDecember 10, 2009 at 10:21 AMस्वरुपमा ति मान्छेहरु !के यस्तै हुन्छन्मान्छे जस्ता देखिनेयी मान्छेहरु ? .........वास्तबमै बादरहरु।।। सही लेख्नु भयो। तपाईको तिखो कलमलाई सल्युट छ है।ReplyDeleteHAWADecember 14, 2009 at 3:52 AMमान्छे येस्तई नै हुन्छन शिव जी के ति हाम्रै प्रतिबिम्ब हैनन रReplyDeleteAdd commentLoad more...